I-24H Global Serviece - I-NBC Electronic Technologic Co, Ltd.
Misa ihhovisi e-Dongguan (China Mainland), eHong Kong naseMelika, ukuphendula okusheshayo ikhasimende lomhlaba wonke ku-24H.
Ukuze unikeze isevisi engcono kumakhasimende, ngesisekelo sefektri, simisa ihhovisi e-geogia America, HongKong (China), Dongguan Nancheng (Mainland), okuhlose i-R & D / Ukuthengisa, ukuphendula ikhasimende ngokushesha, ukuxhumana okungenasikhala komhlaba.
Nikeza amasampula ku-3-5days, uthembisa ukuqeda ukuklama / ukuthuthukisa isikhunta kungakapheli izinsuku eziyi-15.
Siqoqa onjiniyela abaphezulu, abalinganiselwe be-R & D, sithuthukise imikhiqizo, sihlele amathuluzi, sizenzele thina, iminyaka eyi-10 + ekukhanyeni, isipiliyoni sesixazululo sikagesi, ukwenza ngokwezifiso, sinikeze isixazululo esigcwele sokuxhuma. Isebenza kahle ngehardware esezingeni eliphakeme kanye nemikhiqizo yensimbi engajwayelekile, isikhathi esifushane sokuhola, insizakalo yokuphendula ngokushesha.
Umnikazi wabasebenzi abanekhono eliphakeme, unikezela ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme kumakhasimende
Ngomsindo ngokuhola kobuchwepheshe obuthuthukisiwe, gxila ekuhlakuleleni nasekungeniseni amathalente. Manje, ibhizinisi linabasebenzi abanamakhono aphakeme, eHoud nodokotela abayi-4, kanti abantu abangama-26 banesidanga se-bachelor noma se-masters, ama-40% abo bonke abasebenzi baneziqu zasekolishi noma ngaphezulu. Bonke abasebenzi basebenza kanzima, benza izinto ezintsha, badlula ngokwabo, bathuthukise ukuthuthukiswa kwamabhizinisi, banikeze izixazululo ezintsha zabathengi.
Okwamanje, ibhizinisi liyasebenza ukuhlela ukuthuthukiswa kwemikhiqizo emisha, kwakha okungenamkhawulo okungenzeka ukuthi umhlaba uxhume nokusakazwa kwemisindo yemvelo, ngaphezu kwalokho, i-NBC ibuye inake umphakathi wezenhlalo, isiko lezemfundo nemvelo eluhlaza njll.